नेपालमा कसले कुन मन्दिर निमार्ण गरे ? – Lokpati.com
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नेपाल प्रहरी पक्राउ नेकपा मृत्यु राशिफल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी केपी शर्मा ओली नेपाली काँग्रेस अपराध अमेरिका चितवन प्रचण्ड सरकार
नेपालमा कसले कुन मन्दिर निमार्ण गरे ?
By लाेकपाटी न्यूज On ११ फाल्गुन २०७६, आईतवार ०९:३९
पशुपतिनाथको मन्दिर प्रचण्ड देवले बनाएका हुन् । पशुपतिको हालको मन्दिर जयसिंह देवले निर्माण गरेका हुन् । भक्क्तपुरको ५५ झ्याले मन्दिर सिद्धीनरसिंहले बनाएका हुन् । यो मन्दिरको निमार्ण वि.सं. १६९३मा भएको थियो । न्यातपोत दरबारको स्थापना भूपतिन्द्र मल्लले गरेका थिए । रानी पोखरीको निमार्ण प्रताप मल्लले गरेका हुन् । मान गृह मानदेव मल्लकाो पालामा बनाएका हुन् । कैलाशकुट भवन यक्ष मल्लले बनाएका हुन् ।
भगुनारायाणको मन्दिर राजा मानदेवले निमार्ण गरेका हुन् । धरहरा भिमशेन थापाले बनाएका थिए । सिंहदरबार चन्द्र समशेरले बनाएका थिए । बालाजुको २१ धारा जयप्रकास मल्लले निमार्ण गरेका थिए । बालाजुका २२ धारा रण बहादुर शाहले निमार्ण गरेका हुन् । हनुमान ढोका दरबार प्रताप मल्ले निमार्ण गरेका हुन् । काष्ठमण्डप को निमार्ण विसेतले गरेका हुन् ।
मेलिटरी अस्पताल चन्द्र शमसेरले निमार्ण गरेका हुन् । पाल्पाको रानी महल खड्ग शमसेरले निमार्ण गरेका हुन् । अशोक स्तम्भ भारतीय सम्राट अशोकले गरेका हुन् । वसन्तपुरको नौतले दरबार पृथ्वीनारायण शाहको पालामा निमार्ण भएको हो । सहीद गेट रत्नबहादुर तुलाधारले बनाएका हुन् । मीन भवन मीन शमसेरले बनाएका हुन् । दक्षिण कालिको स्थापना प्रताप मल्लले गरेका हुन् ।
वीर अस्पतालको स्थापना वीर शमसेरले गरेका हुन् । घण्टाघरको स्थापना पनि वीर शमसेरले गरेका हुन् । कुमारी मन्दिरको सस्थापना जयप्रकाश मल्लले स्थापना गरेका हुन् । झक्तपुरको सस्थापना आनन्द देवले गरेका हुन् । पाल्पाको नारायण मन्दिर अमरसिंह थापाले निमार्ण गरेका हुन् । जैसी देवल लक्ष्मी नारायण शर्माले गरेका हुन् । गरुडको मूत्र्ति भूपतिन्द्र मल्लले गरेका हुन् । घण्टाघरको पूस्तकालयको स्थापना वीर शमसेरले निमार्ण गरेका हुन् । जनकपुरको जानकी मन्दिर टिकम गढीकी महारानी बृशभानु कुमारीले गरेकी हुन् ।
नक्सालको सन्तानेश्वर महादेव नुवाकोटे ठकुरी राजा शंकर देव हुन् । नारायणहिटी राजदरवारको डिजाइनर बी फोर्न हुन् । बागदरवार भीमशेन थापाले बनाएका हुन् । भक्तपुरको सिद्ध पोखरी भीमसेन थापाले निमार्ण गरेका हुन्। नारायणहिटी, लालदरबार, सेतोदरबार वीर शमशेरको पालामा बनाएका हुन् । रेल वेको सुरुवात चन्द्र शमशेरले गरेका थिए । जाउलाखेलको चिडियाखाना जुद्ध शमशेरको पालामा बनाएका हुन् । रोप वेको निर्माण चन्द्र शमशेर गरेका हुन्। हनुमानढोका दरबार प्रताप मल्लले बनाएका हुन् ।